Maalin: Janaayo 28, 2018
Iskoolka IETT iyo Iskoolka Guud ayaa dib loo hagaajin doonaa
IETT waxay isku diyaarineysaa inay u aaddo dib u eegis lagu sameeyo xargaha iyo dariiqyada. IETT, oo lagu hubin doono dariiqyada basaska garoonka dhexdiisa, waxay mari doonaan isbaddallo ka dhacay Istanbul iyadoo laxiriirta hazrhat, wadada iyo jadwalka. IETT, 14 ee falanqaynta duurka [More ...]
Gawaaridu waxay ku midoobaan magaalada Tram
Qeybta ugu dambeysa ee '13-mitir' ee qadka Konak Tram, oo dhererkiisu yahay qiyaastii 50 kiiloomitir dhererkeeda magaalada İzmir, waxaa lagu dhammeystirey Mithatpaşa Underpass. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, bartamihii Febraayo [More ...]
Japan waxay isku diyaarineysaa inay qaado tilaabo xiiso leh si loo yareeyo tirada deerada ku dhinta shilalka tareenka. Cod-sameeyaha lagu dhigayo tareennada wuxuu soo saari doonaa deerada oo neefsata iyo eeyaha ku qulqulaya si ay uga fogaato inuu dego-ha ka soo xerooda biraha. Japan [More ...]
Gaadiidka Burburinta ee Boosaasta in la Bakhtiiyo si tartiib ah
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, oo salaadda subax ku tukanaya Masjidka Şükraniye Yellow, ka dibna shacabka kula kulmay miiska barakada. Duqa magaalada Aktaş wuxuu cadeeyay in dhibaatada ugu weyn ee Bursa in si tartiib tartiib ah looga soo kaban doono rarka taraafikada, [More ...]
TCDD 5. Şevket Keskin, Gudoomiyaha Ururka Shaqaalaha ee Ganacsatada iyo Farshaxaneyaasha Malatya (MESOB), oo cadeeyay in shirkadu tahay sida derbi u dhexeeya magaalada iyo Yeşiltepe, wuxuu yiri: Business, [More ...]
Mersin Tareenka wuxuu isku xiraa Badda Badarkaaga
Independent warshadlaydu 'iyo Ururka Ganacsatada ee (MUSIAD) by MUSIAD Mersin Council Sector Logistics Laanta marti ah' shirka Continental Logistics Base Turkey 'tashi Kaapelitalo lagu qabtay qayb ka mid ah Wasiirka Horumarinta Lutfi Elvan. shirka [More ...]
Shaqaalaha MOTAŞ oo ka socda laanta oliviga dhiigga
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Malatya iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha Motaş AŞ. shaqaalaha, oo ah kii ugu horreeyay dhiiggeenna, ka dib ayaan nafteenna u huri karnaa mashruuca 'iyadoo la adeegsanayo awoodda ciidammada Turkiga ee Afrin, gaar ahaan YPG iyo PKK [More ...]
Xiisaha Bariga Express oo la labanlaabmay Semester Break: Adeegga tareenka TCDD ee Eastern Express ee u dhexeeya Ankara iyo Kars ayaa sii kordha maalin kasta oo dhaafaysa. Ankara [More ...]
Maanta taariikhda: 28 Janaayo 1898 ee dhulka Ottoman Taariikhda
Maanta Taariikhda 28 Janaayo 1898 Xuduuda Ottoman, tareenada Britishka ah waa İzmir-Aydın iyo Mersin Adana, waxayna wadajir u dhigaan 440. Isla sannadkaas, Faransiiska, 1266, Jarmalku waxa uu lahaa xadiid dheer oo xadiidan oo dheeraan ah.